Ikhaya lembali kwimizuzu engama-30 yeehektare ukusuka echibini laseGaston
Igumbi elinomnyango ophumela ngaphandle yonke sinombuki zindwendwe onguStephen
Eli khaya lineminyaka eyi-150 liyindawo ekhethekileyo yokutyelela. Ibandakanya zonke izinto ozifunayo nge-WiFi ekhawulezayo, ikhitshi eligcweleyo, igumbi lokuhlambela elibanzi kunye nebhedi yakho yabucala yobukhulu benkosi. Singasathethi ke ngeehektare ezingama-30 kunye nemfihlo yokuyigcina kubandakanya ichibi labucala, idokhi, ukukhwela isikhephe, kunye nomgodi womlilo. Yiza uphumle kwaye ukonwabele le ndawo ihlaziyiweyo okanye uye ngaphaya kwichibi elikufuphi laseGaston lokuloba, ukukhwela isikhephe, ukutyibilika emanzini, okanye kwindawo yokutyela esecaleni kwechibi!
Iindwendwe zinokufikelela ngokupheleleyo kwindawo yabucala encanyathiselweyo enomnyango wayo, Igumbi lokuhlala, igumbi lokulala, ikhitshi, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye ne-jetted tub, iTV smart, kunye neWiFi. Ungakonwabela ukuba neencoko ezimnandi kwiveranda engaphambili, usebenzisa iqula lomlilo, okanye uhambe ujikeleze idlelo elingasemva ukuya echibini. Iityhubhu zomlambo ezivuzayo okanye isikhephe esibheqayo zikwakhona ukonwabela emanzini okanye uziphose nje edokhini.
ibhedi elala umntu omnye eyi-1, isofa ekwayibhedi eyi-1, \_u00A0Ibhedi yosana eyi-1
4.94 · Izimvo eziyi-193
Eli khaya liyimbali libekwe kwindawo yalo yabucala yeehektare ezingama-30 ngoko ke kukho indawo eyaneleyo yokuhambahamba. Nangona ikwimizuzu nje ukusuka edolophini kuyakhawuleza kwaye kulula ukuphuma uyokutya, uyokuthenga, nokunye.
Ubumfihlo bakho yeyona nto siyixhalabeleyo kodwa siyavuya ukunxibelelana ukuba uyathanda. Kwaye ngokuqinisekileyo nceda ufowune, umbhalo, okanye i-imeyile ukuba kukho nayiphi na imibuzo okanye iimfuno eziphakamayo.